Antso any amin'ny minisitry ny fitantanam-bola any India hanazava ny torolàlana momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Antso any amin'ny minisitry ny fitantanam-bola any India hanazava ny torolàlana momba ny fizahan-tany momba ny fizahantany
Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
torolàlana momba ny fizahan-tany ho an'ny fizahantany
Amin'ny anaran'ny Indostrian'ny fizahan-tany Kerala, Baby Mathew, filohan'ny Kerala Travel Mart Society, dia nisaotra ny Governemanta India noho ny fidirany an-tsehatra hanampy ny indostria mandritra ny krizy ratsy indrindra amin'ny alàlan'ny fampidirana ECLGS 3.0, varavarankely ahazoana antoka manokana namboarina hanakona ireo orinasa mpandraharaha amin'ny fandraisam-bahiny, fitsangantsanganana ary fizahan-tany, ary fialamboly sy fanatanjahantena manomboka ny 31 martsa 2021.
Ny fangatahana dia manontany ny Hon. Minisitry ny fitantanam-bola any India hanadihady ny momba ny tsy ara-dalàna ao amin'ny torolàlana momba ny asa sy ny FAQ.
Ny iray amin'ireto fehezan-dalàna ireto dia mifanohitra amin'ny volavolan-kevitr'ity tetik'asa ity dia ny fanampiana ireo mpindrana amin'ny alàlan'ny fanombanana ny kaontiny amin'ny toe-pahavoazana mialoha ny aretina.
Noho ny onja mahery vaika faharoa an'ny COVID-19 dia tsy misy orinasa ara-pizahan-tany ara-bakiteny.
Ny governemanta dia nanitatra ny drafitra fiantohana trosa maika 3 volana hatramin'ny 30 Jona ary koa nanitatra ny sehatra ho an'ny sehatra vaovao, ao anatin'izany ny fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana ary fizahantany. ECLGS 3.0 dia mety hampiditra ny fampindramam-bola hatramin'ny 40 isan-jaton'ny trosa rehetra mivoaka manerana ny andrim-panjakana fampindramam-bola hatramin'ny 29 febroary 2020, hoy ny Minisiteran'ny Vola tamin'ny fanambarana iray. Ny fe-potoana fampindramam-bola nomena tamin'ny ECLGS 3.0 dia 6 taona ao anatin'izany ny fe-potoana maharitra 2 taona.
Nisy ny fangatahana natao tamin'i Hon. Minisitry ny fitantanam-bolan'ny India hamotopotorana ireo tsy ara-dalàna amin'ny asa torolàlana sy FAQ navoakan'ny National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC), noho io antony io dia nofoanana ny tetika.
Eo ambanin'ny "Status ny mpisambotra," araka ny fampandrenesana momba ny tetika, andalana 1, 4 ary 7 amin'ireo torolàlana momba ny asa sy FAQ No. 8 sy 109, ny tetika dia manolotra ny fanohanana ny kaonty fizahan-tany, fitsangatsanganana ary fandraisam-bahiny izay voasokajy ho mahazatra, SMA-0, ary SMA -1 ary manana DPD (andro lasa izay) dia tsy nihoatra ny 60 andro hatramin'ny 29 Febroary 2020.